အစဉ်အဆက်အဘယ်အရာကိုအံ့ဩ Star Wars: လက်စားချေ၏ သံSာ's Boga တစ် ဦး အတွက်တူပေလိမ့်မည် Lego 2021 ခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ထား? တည်ဆောက်သူတစ် ဦး မှာအဖြေရှိသည်။
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည် Obi-Wan Kenobi နှင့် General Grievous တို့၏နှစ်များတစ်လျှောက်ပြသခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စုံတွဲနှစ်တွဲကိုပေးခဲ့သည် - ပထမမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၏ ၇၂၅၅ General Grievous Chase၊ ထို့နောက် ၇၅၀၄ မှာ General Grievous 'Wheel Bike တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသေတ္တာများထဲမှတစ်ခုတည်းကသာကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Grievous နေရာမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသောကြောင့် Bedi, အမျိုးသမီး varactyl ကို Jedi master ကိုကပ်လျက်နေရာမှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဒါမူရင်း Lego ပုတ်သင်ညိုနှင့်တူသောသားရဲ၏ဗားရှင်းသည်ကြီးမားလှသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းများတွင်ပုံသဏ္elyာန်ထူးခြားစွာပုံသွင်းထားသော်လည်း (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသော) ဦး ခေါင်း၏ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ Star Wars အကွာအဝေး။ ထို့အပြင် Lucasfilm ၏ဒီဇိုင်းဌာနမှအိပ်မက်မက်သောရောင်စုံသတ္တဝါအားလုံးဝတရားမျှတမှုမရှိခဲ့ပါartment ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, အ Lego Star Wars အဖွဲ့၏မကြာသေးမီကအာရုံစိုက် classicသေချာရောင်းသူများကြိုက်တယ် X- အတောင်ပံ နှင့် TIE တိုက်လေယာဉ်များ အခြားအရာအားလုံးအထက်မှဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရှိတစ် ဦး မှ Boga ကဲ့သို့သောနယ်ပယ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရနိုင်ပါ Lego မကြာမီမည်သည့်အချိန်သတ်မှတ်မည် မင်္ဂလာပါ hachiroku24 ယခု reimagining အားဖြင့်ခေတ်သစ်အစုစုအတွက်ထင်ရှားတဲ့ပျက်ကွက်ဖြေရှင်းပေးရန်ရှာကြံခဲ့သည် classic ၂၀၀၅ သည် ပို၍ လက်တွေ့ကျသောအတိုင်းအတာဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Boga သည်အထက်ပါဗီဒီယိုနှင့် Grievous ၏စက်ဘီးဆိုင်ကယ်နှင့်အတူတကွမည်သို့လာရောက်နေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အလှည့်အပြောင်းကိုလည်းလျှော့ချခဲ့သည်။ ရလဒ်ကတော့ Microfighters တွေထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးပြီးအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့သုညဒြပ်စင်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ Revenge of ကအဓိကကျတဲ့မြင်ကွင်းမှာအနာဂတ်အရာရှိအတွက်အငြင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ သံSာ.
ထိုနေ့မရောက်မှီတိုင်အောင် (၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်လျှင်) ကျွန်ုပ်တို့သည် hachiroku24 ၏ version ကိုလုပ်ရန်သာလိုတော့သည်။ ဒါကမဆိုးပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဘီးဟာတကယ်ကိုမဖွင့်နိုင်ရင်တောင် Boga နဲ့ Grievous ဆိုင်ကယ်နှစ်ခုလုံးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပါ။
တစ်ခုအပါအ ၀ င် hachiroku24 ၏တည်ဆောက်မှုများကိုစစ်ဆေးပါ ချဲ့ထွင်မှု သို့ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာတစ်ဦး အထင်ကရ Spider-Man2မြင်ကွင်းတစ်ခု နှင့်တစ်ဦး Marvel-focused ပြန်လည် အသစ်က၏ ဟယ်ရီပေါ်တာ buildable ဇာတ်ကောင် - ကျော် ယူကျု့ချန်နယ်.
← အဆိုပါ join Brick Fanatics YouTube အဖွဲ့
အကြီးမားဆုံး LEGO Jurassic ဥယျာဉ်သည်ယခုနှစ်အနားယူတော့မည်ဖြစ်သည် →